Tsvaga Inbound Links Nyore neBlekko | Martech Zone
Tsvaga Inbound Links Nyore neBlekko
Muvhuro, March 19, 2012 Muvhuro, March 19, 2012 Douglas Karr
Unotenda kana kwete, Google haisi yega injini yekutsvaga pasi. Mumwe wavo akauya zvakanyanya kubatsira patinoita tsvagiridzo yedu pawebhusaiti backlinks iri Blekko. Zviri nyore sekuwedzera a / inbound mushure mezita rezita:
Izvo zvinoguma zvinopa iwe zvinongedzo kune yako saiti uye iyo anchor zvinyorwa izvo zvashandiswa kana uchitaura nezvazvo.
Blekko anozivisawo zvakapetwa zvirimo uye zvinobva kunze zvinongedzo, futi!
Tags: Backlinksdomain linksinbound linkskutarisa domain zvinongedzo
Yemagariro Bhizinesi, iyo Quiet Shanduko